Native, Hybrid and Web Mobile App - MYSTERY ZILLION
Native, Hybrid and Web Mobile App
Hybrid app တွေအနေနဲ့ develop လုပ်ရတာ အရမ်းမြန်ဆန်မယ်။ Platform တွေအများကြီးအတွက် ခဏခဏရေးနေစရာမလိုဘူး။ iOS အတွက် swift သိဖို့မလိုအပ်တော့သလို Android အတွက်လည်း java တတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။ App ကို maintain လုပ်ရတာပိုလွယ်ကူတယ်။
Native app တွေက performance ပိုင်းမှာပိုပြီးတော့ ကောင်းတယ်။ security ပိုင်းမှာလည်း ပိုစိတ်ချရတဲ့အပြင် user experience ပိုင်းမှာလဲ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Android ရေးဖို့အတွက် java သိဖို့လိုပြီး iOS အတွက် swift မဟုတ်ရင် objective-c ကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ hybrid app တွေကို develop လုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲဆိုရင် project deadline အရမ်းကပ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ အရမ်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ market ထဲရောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အရင်ဆုံး hybrid app နဲ့စပြီးတော့ နောက်ပိုင်း native app တွေကို ပြန်ပြောင်းသွားကြတာများပါတယ်။
အရင်တုန်းက facebook ဆိုရင်လည်း HTML5Hybrid Web App ကို အသုံးပြုပေမယ့် user feedback တွေက မကောင်းတော့ native app ဘက်ကိုနောက်ဆုံး ချိန်းသွားတာပါပဲ။
Native နဲ့ရေးထားမှန်း Hybrid နဲ့ရေးထားမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ... ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲ...
iOS ကတော့ သုံးနေကျဆိုရင် သိသာတယ်။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ app က native လား hybrid လားဆိုတာ ဘယ်လောက် smooth ဖြစ်သလဲဆိုတာနဲ့ ခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်တယ်။
Android မှာဆိုရင်တော့ Developer Option ဖွင့်ပြီး ကိုယ်သုံးနေတဲ့ app က Native/Hybrid ခွဲခြားနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့ Settings > Developer Options ကိုသွားပြီး "Show view bounds" ကို enable လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့ app ကို ပြန်ဖွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ အကယ်လို့ grid တွေအများကြီးနဲ့ မြင်ရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါက native app ဖြစ်ပြီး web view တစ်ခုပဲ ရှိတဲ့ဟာကိုတော့ hybrid app လို့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ Paytm က native နဲ့ရေးထားတာ ဖြစ်ပြီး My Vodafone ကတော့ Hybrid app ပါ။
image from https://www.techvigil.com
android ကို Hybrid နဲ့ရေးဖို့ ဘယ်ကလေ့လာရမလဲ ? Hybrid နဲ့ရေးထားတဲ့ APP တွေကိုပြင်ရတာလွယ်လား ? တခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ အခုလက်ရှိ သူများ cordova နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကြည့်နေလို့ Website ကောင်းကောင်းလေး လမ်းညွန်ပေးပါလား။
Coda အပြင် လူသုံးများတာက Ionic ပါ။ ပြင်ရတာ လွယ်ပေမယ့် ရေရှည်အတွက် တော့ အဆင်မပြေဘူး။ App တစ်ခု မြန်မြန် လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်နိုင်တာတွေ မလုပ်နိုင်တာတွေ စသည့် limit ကို သိဖို့ လိုတယ်။
Cross platform အတွက် React Native , flutter စတာတွေကို စမ်းနိုင်ပါတယ်။
Hybrid ကို Production Level မှာ သုံးဖို့​တော့အားမ​ပေးချင်ဘူး။ ​ရေးရလွယ်​ပေမဲ့ တစ်ကယ်တမ်းကျ တစ်ခုခုလိုချင်ရင် resources နဲ​တော့ပိုခက်တယ်။ learning အတွက်​ရော maintainance အတွက်​ရော development အတွက်​ရော resources ကအရမ်းရှားလွန်းတယ်။
Native ကို မလုပ်ချင်ရင်​ Cross-Platform ​လောက်​တော့ လုပ်သင့်တယ်။
React Native, Flutter, Xamarin အခုလက်ရှိ popular ဖြစ်ပြီး Production level သွားလို့ရတယ်။
ကျ​​နော်က​တော့ အခု Xamarin.iOS နဲ့ Production App ​ရေး​နေတာ ၈လ ​လောက်ရှိပြီ။ App Store Release ​တွေလဲလုပ်ထားတာ အဆင်​ပြေတယ်။ Xamarin က React, Flutter ထက် သက်တမ်းပိုကြာ​တော့ Community လဲပိုကြီးပြီး 3rd Party Libraries ​တွေကလဲ Native Libraries ​တွေကအတိုင်း အကုန်လုံးနီးပါးရှိတယ်။ SDK support ကလဲ ချက်ချင်း Update ဖြစ်တယ်။ IDE ကလဲ Visual Studio နဲ့မို့လို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ Professional ဆန်တယ်။ (Xcode လို​တော့​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါး မရှိဘူး။ စက်​လေးတယ်)
ဒါ​ပေမဲ့လဲ ကျ​နော်က​တော့ ​နောက် Project ​တွေကို Swift နဲ့ပဲ ​ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။